We She Me: ဟစ် ၆၀ ပြည့် အမှတ်တရ
ZT - 3/16/10, 9:19 PM
အကျိုးပြု ဆိုတာမျိုးကြီးတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ကိုယ့်စာကို တခြားသူတွေ ဖတ်ပြီး ကြိုက်တယ် ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်။ ဗဟုသုတ ရမှ ရယ်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး အပျင်းပြေလောက် ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကို ကျေနပ်ပါတယ်။
Anyway, Thanks for your post. :)
Nge Naing - 3/16/10, 9:29 PM
Congretulations!! သုံးနှစ်မှာ ပို့စ် ၂၀၀ ကျော်နဲ့ Hit Counter ၆ သိန်း စာလာဖတ်ကြတာ အားရစရာပဲ။ စာရေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ရေးတာကို သူများဖတ်စေချင်လို့ ရေးတာပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်တွေ့ ဘယ်လောက် အသုံးတည့်သွားတယ် မတည့်သွားဘူး ဆိုတာထက် လာဖတ်ကြတယ် ဆိုကတည်းက အားပေးမှုကို ရထားပြီးဖြစ်လို့ ပီတိဖြစ်မှာက သေချာပါတယ်။ လာလည်း လာဖတ်တယ် ဖတ်တဲ့သူတွေမှာ လက်တွေ့လည်း အကျိုးရှိသွားကြတယ် ဆိုရင်တာ့ အတိုင်းထက်လွန်ပဲပေ့ါ။ ဆက်လက်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂ်ရေးနိုင်ပါစေ။
Anonymous - 3/16/10, 10:00 PM
Pls tell me IT Blog address.
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် - 3/16/10, 10:00 PM
အစ်ကို သုံးသပ်ပြထားတာတွေအားလုံးကို နှစ်သက်စွာ ထောက်ခံပါတယ်။
Congratulation ပါ အစ်ကိုရေ..
စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာနှင့် ပျော်ရွှင်စွာဆက်လက်ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ။
ko9- 3/16/10, 10:20 PM
Anywayုkeep it up !
Anonymous - 3/16/10, 11:11 PM
At least i learned something from your posts.
i amaregular reader of your blog. but i left comments very rare.
it doesn't mean that i didn't want to say thanks...
please keep up your good works...
Kay - 3/17/10, 12:07 AM
အား..ဒီနှုံးအတိုင်း ဆို...မကြာခင်မှာ..ဟစ် မီလျံနာ ကြီး ဖြစ်တော့မယ်..ကိုအန်ဒီ...
ရွှန်းလဲ့ - 3/17/10, 12:11 AM
ဗဟုသုတရတဲ့ ပိုစ့်တွေအတွက်ကော ရယ်ရတဲ့ပို့ စ်တွေအတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
khin oo may - 3/17/10, 12:23 AM
ပိုစ်တင်မက ဆိုက်ဘားက လင့်တွေကပါ စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ဝန်ခံပရစေ။
Min - 3/17/10, 12:27 AM
Thanks Ko Andy and Family
တောင်ငူသား - 3/17/10, 12:44 AM
ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာရှေ့ရောက်တိုင်း ဖွင့်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့သုံးခုရှိပါတယ်။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ၊ ကိုအန်ဒီ နဲ့ ကျွန်တော့်ဘလော့ပါပဲ။ အနည်းဆုံး မဖွင့်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ နေ့မှာတောင် သုံးကြိမ်လောက် ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့မှာ သတင်းတွေ စုံစုံလင်လင် link ချိတ်ထားလို့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းကို အလွယ်တကူ ရှာဖတ်နိုင်သလို၊ ကိုအန်ဒီဘလော့မှာ ကောင်းနိုးရာရာ link ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက နေ့စဉ် အသစ် ဖြစ်ဖြစ်နေတာကြောင့် ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်ခုက ဖတ်စရာကုန်ပြီဆိုမှ ကျွန်တော့်ဘလော့ side bar က တက်လာတဲ့ အသစ်တွေကို စိတ်ဝင်စားသလို လိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုအန်ဒီဘလော့က ပိုင်ရှင်က အသစ်မတင်လို့ ဖတ်စရာမရှိရင်တောင် ဘေးမှာ တက်လာတဲ့ အသစ်တွေ ဖတ်လို့ရသလို၊ တချို့ ပို့စ်အဟောင်းတွေကိုလဲ မွှေနှောက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ပို့စ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးထင်ရင် မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။ ပို့စ်အများစုမှာ စာရေးသူရဲ့ အားစိုက်ထုတ်မှုကို မြင်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီနေ့လို ခြောက်ဆယ် ဖြစ်ရတာပါ။
အထူးသဖြင့် ထူးမြတ်လင်းနဲ့ မြတ်နိုးတို့ရဲ့ ချစ်စဖွယ် ပုံတွေ ဗွီဒီယိုလေးတွေကို ကြည့်ရတာ စိတ်ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာ အသစ်တင်မယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။
Congratulations! ပါ ကိုအန်ဒီ
ဒဏ္ဍာရီ - 3/17/10, 1:08 AM
Congratulations! ပါ အကို...
ဘလော့ (၃) နှစ်ပြည့်လေးမှ စပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစုတွေနဲ့ အတူ စာတွေလည်း ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ။
အကို့ ဘလော့လေးက စာပေတွေဟာ စာဖတ်သူတွေအတွက် တစုံတရာ အကျိုးပေးတဲ့ စာပေတွေပါ။ ဘ၀ပေးအသိ၊ ပညာအသိတွေ မှတ်သားစရာတွေနဲ့ အတုယူ သင့်တာဖြစ်လို့ လေးစား အားကျမိပါတယ်။
Naomie - 3/17/10, 1:20 AM
I always visit ur blog but it is the first time i write comment. I learned something whenever i read ur posts. So 1st want to say Thank u for sharing and plz keep it up. :)
Anonymous - 3/17/10, 1:46 AM
အားပေးလျှက်ပါ။ မှတ်ချက်ပေးရတာ မလွယ်လို့ မပေးဖြစ်တာပါ။
Shinlay - 3/17/10, 3:37 AM
nu-san - 3/17/10, 3:57 AM
ဟစ် ၆ သိန်းတဲ့..ပျော်စရာကြီး....... :)
အမကတော့ ဟင်းချက်တဲ့ပို့စ်တွေရယ်၊ ကလေးအကြောင်းတွေရယ်
၊ sidebar က share ပေးထားတာတွေရယ်ကို ပိုဖတ်ဖြစ်တယ်.. အနည်းဆုံးတော့ တစ်နေ့ တစ်ခေါက် ၀င်ကြည့်လိုက်မိတာပဲ.. ဘာမှ ကြည့်စရာမရှိရင်လည်း သားတို့ သမီးတို့ဓာတ်ပုံလေးတွေ လျှောက်ကြည့်နေလိုက်တာပဲ.. အခုနောက်ပိုင်းဆို ကလေးပို့စ်တွေကို ပြန်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်.. အမအတွက်တော့ ကလေးပို့စ်တွေက အမှန်တကယ် အသုံးဝင်ပါတယ်.. ;P
ရွှန်းမီ - 3/17/10, 4:08 AM
ရိုးသားတဲ့စာရေးပုံကို လူတွေသိပ်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
chit - 3/17/10, 4:41 AM
Nu Thwe - 3/17/10, 5:36 AM
အချိန်မရလို့ သေသေချာချာ မမန့်နိုင်သေးတာ တောင်းပန်ရင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကမန်းကတန်း ပြောသွားပါတယ်နော့။
မယ်ကိုး - 3/17/10, 10:54 AM
Congratulation ! စာအမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာရေးရေးကြိုက်ပါတယ်။ စာတွေ ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
Anonymous - 3/17/10, 11:39 AM
အမလေးဟယ် ဒီလောက်ဟစ်တွေရနေတာတောင် ကျေးဇူးအတင်ခံချင်နေသေးတယ်
နွေးနေခြည် - 3/17/10, 1:30 PM
ဒီဘလော့ကို ၂၀၀၉ လောက်ကမှစသိခဲ့တာပါ။ အချိန်ရရင်ရသလို အဟောင်းတွေလည်း ပြန်ရှာဖတ်ပါတယ်။ ကွန်မန့်တော့ ချန်ထားခဲပါတယ်။ ကိုအန်ဒီဘလော့ကို အမြဲအားပေးနေပါတယ်း)
P.Ti - 3/17/10, 1:46 PM
Congratulations, Ko Andy.
ဘာပဲရေးရေး စေတနာသန့်ရင် ဖတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ ဘယ်လိုပဲ hit တက်တက် ၆သိန်းရဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။
ကိုအန်ဒီရဲ့ ဗဟုသုတပေးတဲ့ ပို့စ်တွေနဲ့ နဲ့ ညာဖက်က Feed Roll က ဟစ်တက်စေတဲ့ အကြောင်းတွေလို့ထင်ပါတယ်။
Rita - 3/17/10, 1:55 PM
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ :)
reader တယောက်အနေနဲ့ ဒီဘလော့ရဲ့ ထူးခြားချက်လို့ ယူဆမိတာကို ပြောရရင် Post တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Side Bar က Link တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စနစ်တကျ အသေအချာရှိတာပါပဲ။
အကြောင်းအရာကို သိပ်စိတ်မဝင်စားမိရင်တောင်မှ blogger က စနစ်တကျ အသေအချာ ရေးထားတယ် ဆိုတာကို သတိပြုမိစေပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အများကြီး ပိုများပါတယ်။
Myo Kyaw Htun - 3/17/10, 2:02 PM
You missed to write 50? :) ... Congrats for your achievements Ko Andy... The stats is amazing asapersonal blog.
Zephyr - 3/17/10, 2:11 PM
Congratulations ပါ ကိုအန်ဒီ ...။
ကျွန်တော်ကတော့ ဟင်းချက်နည်းတွေကြောင့် လာဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
မိသားစုတွေ တွေ့ကြုံနေရတာ ... သဘာဝကျတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေလိုဖြစ်နေတာကြောင့် လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုအန်ဒီတို့ မိသားစုတွေ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
လုလု - 3/17/10, 2:38 PM
အစ်ကိုရေ့့့
Congratulation ပါနော်။ အစ်ကို့ဆိုက်ဒ်ကိုတော့ နေ့တိုင်းမဖြစ်မနေ ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုအကြောင်း ကြည်နူးစရာပါတယ်၊ ဟင်းချက်နည်းပါတယ်၊ ဗဟုသုတရဖွယ်တွေပါတယ်။ side bar ကိုလည်း သဘောကျတယ်။ အရမ်းသေသပ်လှပပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပါနော်။
နောက်ထပ်လည်း ရေးပေးပါဦးနော်။ အားပေးလျက်ပါ။
သက်ဝေ - 3/17/10, 3:41 PM
Congratulation Ko Andy...
ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...
ပျော်စရာ မိသားစုလေးအကြောင်း ကစလို့ ဟင်းချက်တာတွေရော... လေးလေးနက်နက်ရေးထားတဲ့ တွေးစရာပိုစ့်တွေရော... အားလုံးကို နှစ်သက်ပါတယ်...။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာတွေ အများကြီး ဆက်ရေးနိုင်စေကြောင်း ဆုတောင်းတယ်နော်...
ချစ်ကြည်အေး - 3/17/10, 4:07 PM
ကိုအန်ဒီ နှင့် သူ၏ အချစ် သူမ...,၆သိန်း...၃နှစ်မှာ...နဲတာမှ မဟုတ်တာဗျာ...စာဖတ်သူများတာနဲ့တင် ရေးရကျိုး နပ်ပါပြီ၊ စာဖတ်သူ တခုခု ရသွားရင်ပဲ ကျေနပ်ရမှာ...။
Congratulation ဗျာ...ရှေ့အများကြီး ဆက်လက် ချီတက်နိူင်ပါစေ:)
T T Sweet - 3/17/10, 4:08 PM
ကိုအင်ဒီ ... ရေးတဲ့စာတွေသာမက လင့်ခ်ထားတဲ့ ဘေးက feed roll ပို့စ်လေးတွေပါ ကြိုက်လို့ နေ့တိုင်းနီးပါး လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဘူးတဲ့ ပေဖူးလွှာတို့လို့ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကို ဖတ်ရသလို အရသာမျိုး သုတ၊ ရသာအစုံပါပဲ။ ကိုအင်ဒီကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ ပို့စ်အသစ်တက်လို့ကတော့ အတိုင်းထက်အလွန်၊ တံခွန်နဲ့ ကုက္ကားပေါ့။
ကိုယ်ရေးတဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို လင့်ခ်ပေးတာလဲ comment ပေးတာထက်တောင် အသိအမှတ်ပြုထားတယ်၊ ရှယ်ပေးတယ်ဆိုတာ အရင်ကတည်းက သဘောပေါက်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒီအတွက်လဲ အများကြီးကျေးဇူးပါ။ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ။
Mi Nwe - 3/17/10, 5:47 PM
ကိုအန်ဒီတို့မိသားစု ဘလော့ခ်လေးကို နေနေဆီကနေ သိပြီး လာဖတ်နေတာပါ..။
၁) စလုံး အော်ဇီ အကြောင်း
၂) ကလေးတွေ အကြောင်း
၃) ကလေးမီးဖွားတဲ့ အကြောင်းတွေပါ..။
ဟင်းလဲ ချက်တတ်တော့ နောက် ရုပ်ရှင်ကားလဲ ကြည့်ဖြစ်တာနဲ့ အဲဒါတွေနဲ့ ပက်သက်ရင်သိပ် မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး..။ အိုင်တီကတော့ တစ်ခုခုလုပ်ချင်မှ ရှာဖတ်တာဆိုတော့ သွားကို မကြည့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါ..။ ဥာဏ်မမီတာလဲ ပါပါတယ်..။
အခု တစ်လလောက်ကမှ စဖတ်ဖြစ်တာဆိုတော့ အကုန်ဟာ အသစ်ဖြစ်နေပြီး ရုံးကနေ အချိန်ရတိုင်း ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်..။
မဖြစ်ညစ်ကျယ် ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ခ် အသေးလေးတစ်ခု ၂၀၀၄ လောက်ထဲက ရှိနေတော့ ကိုယ်ရေးတာအားလုံးက ကိုယ့်အကြောင်းကလွဲလို့ မရေးတတ်တာမို့.. ကိုအန်ဒီတို့ မောင်နှံလို သူများကို ဗဟုသုတလဲ ပေးနိုင်၊ ဖျော်ဖြေရေး ပုံစံလဲဆန်၊ တစ်ချို့ဟာတွေဆို မှတ်သားရတာမို့ အချိန်ပေးရေးနေတာကို တကယ်သတိထား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
နောက် ဒီဘလော့ခ်ကနေဆက်ပြီး ဆက်ဖတ်ဖြစ်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်..။
kaungkinpyar - 3/17/10, 6:13 PM
အမြဲ လာဖတ်မိတဲ့ ဘလော့ပါ၊ ဒီဘလော့ ကနေမှ တဆင့် ဘေးဆိုဒ်ဘား က တင်ထားတာတွေ တခါထဲ ဖတ်မိပါတယ်...
MrDBA - 3/17/10, 6:43 PM
Anonymous - 3/17/10, 9:28 PM
့HIT ဘယ်လို COUNT လုပ်သလဲဆိုတာတွေးနေတာ။ကိုအန်ဒီ
ဟစ် တွေက ၂ နဲ့ စားရမလား။ ၄ နဲ့ စားရမလားတွက်ကြည့်နေတာ။
ဘာလို့ လဲဆို တော့ ဘလော့ဂ်ကိုဝင်တာနဲ့ ဟစ်ကတစ်ကြိမ် ။နောက် ပို့ စ်တစ်ခုဖတ်တယ်ဆိုပါတော့။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်။ လူတစ်ယောက်ထဲက ဒီပို့ စ်ကို ၂ပြန်ဖတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဟစ်က ၄ ကြိမ် ဖြစ်သွားပီ။
ကျွန်တော်တွက်တာမှန်လားတော့မသိဘူး။ ၄နဲ့ စားမယ်ဆိုရင်တောင် ၁သိန်းခွဲ ကျန်ပါသေးတယ်။
Andy Myint - 3/17/10, 9:42 PM
တွေးတာ မှန်ပါတယ်။ ဒီလို Home Page ကနေ နောက်ထပ် ပို့စ်တစ်ခုကို ဖတ်တာ ပို့စ်တစ်ခုကို ၂ ခါဖတ်တာ "Interestingness" ကို ပြတဲ့ အတွက် ၁ နဲ့ တိုင်းတာထက် ၁x ၄ = ၄ က အတိုင်းအတာ တစ်ခုကို သိစေပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ http://wesheme.blogspot.com/2007/07/bouncerate.html
လသာည - 3/20/10, 12:34 PM
ကျွန်မကတော့ ဒီဘလော့ကို သိတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံး ဖတ်မိကတဲ့က အရမ်းကို သဘောကျသွားပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောကြသလိုပဲ ကိုအန်ဒီတို့ ရေးတဲ့ စာတွေက စာဖတ်သူကို ဗဟုသုတရစေသလို၊ စာမြည်းတွေ ပေးထားတဲ့ ဘေးလင့်ခ်က စာတွေကြောင့် မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာစာကို ဖတ်ရသလိုမျိုးပဲမို့ . ၀င်ပြီးရင် တော်တော်နဲ့ မထွက်ဖြစ်ပါဘူး။ ကြိုက်ရာရွေးဖတ်လို့ ရတဲ့ တကယ့်စာကြည့်တိုက် တစ်ခုပါပဲ..။
Anonymous - 3/27/10, 2:42 PM
Ko Andy & Ma
Even though your blog didn't have much post lately, I can see u put much time and effort in all of them. So, thank you for sharing.
I like your blog as it has interesting links for current affair about Burmease. May I know if you come across any blog or web page for Thayawarda Buddhism ? I am living in Aussie as well but when I try to explain about Buddhism sometimes I could not find the right words . There must beagood web page which you could read about Buddhism muesn't it?
Anonymous - 4/1/10, 11:46 PM
Quite frankly I seldom read your posts.
I visit wesheme just to go to the other links that you provide.